हो, मैले ओलीलाई भेटेँ, अझै पनि सहमतिको सरकार बनाउन सकिन्छ : बाबुराम : RajdhaniDaily.com
Home Breaking News हो, मैले ओलीलाई भेटेँ, अझै पनि सहमतिको सरकार बनाउन सकिन्छ : बाबुराम
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको बताएका छन् ।
नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले प्राइम टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा भट्टराईले ओलीलाई भेटेर ‘प्रधानमन्त्री बनाइदिनुप-यो’ भनेको भनेपछि भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
कुराकानीका क्रममा बस्नेतले भट्टराई १० दिनको विचमा ओलीलाई दुई पटक भेटेको र देशमा राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता रहेको र त्यसको नेतृत्व आफैले लिनुपर्ने बताएको बस्नेतको दाबी थियो । जवाफमा ओलीले आफूविरुद्ध भट्टराईलगायत पुष्पकमल दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपेन्द्र यादव, रामचन्द्र पौडेल सबै लागेको र आफू १२१ जना सांसद भएको पार्टीको नेता भएकाले अरुलाई सहयोग गर्न नसक्ने बताएको बस्नेतले कुराकानीको क्रममा भनेका छन् ।
भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले दूतमार्फत बोलेकाले आफू बोल्नै पर्ने अवस्था आएको भन्दै आफूले महाविपत्तिउन्मुख देशलाई निकास दिन व्यक्ति ओलीलाई नभई प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको बताएका छन् । वर्तमान र पूर्वप्रधानमन्त्रीबाहेकका व्यक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाऔँ भन्दा ओलीले नमानेपछि आफूले उक्त कुरा अरुलाई नभनेको उनको भनाई छ ।
भट्टराईले लेखेका छन्, ‘प्रमले दूतमार्फत बोलेकाले बोल्नैपर्ने भयो–महाविपत्ति उन्मुख देशलाई निकास दिन मैले व्यक्ति ओली हैन प्रम ओलीलाई भेटेकै हो।मैले वर्तमान/पूर्व प्रम बाहेकका व्यक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाऔं भनेकै हो । उहाँले नमानेपछि अरूलाई नभनेको हुँ । अझै पनि धारा ७६(५)बमोजिम बनाउन सकिन्छ । सोचौं ।’
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीमै कर उठाउन बाटो खुला गरिदिएको छ । यसअघि निषेधाज्ञा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र कर नतिरे...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले बाग्मती प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले प्रदेश सभामा दिएको अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति फिर्ता लिन र आत्मालोचना गर्न...
धनगढी । नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले पार्टी निर्देशनविपरीत सरकारमा गएको भन्दै ६ जना मन्त्री र प्रदेशसभा संसदीय दलका सचेतकलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको...
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य समायोजन गरेको छ । निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार आज राति १२...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - February 7, 2020 0
Editor-Picks राजधानी समाचारदाता - March 20, 2020 0
काठमाडौँ । सरकारले बजारमा पर्याप्त ग्यास छ भनेर दाबी गर्दै आए पनि उपभोक्ताले सहजै ग्यास खरिद गर्न पाएका छैनन् । एउटा ग्यास सिलिन्डरका लागि...
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - February 26, 2020 0
ओमाहा । कोरोना जीवाणु (भाइरस) उपचारको पहिलो क्लिनिकल परीक्षण अमेरिकाको नेब्रास्कामा जारी रहेको अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारीहरुले जनाएका छन् । विश्वभर विभिन्न ५० स्थानका ४००...
हिँडेरै घर जान लागेका मजदुरलाई प्रहरीले राेकेपछि झडप
धादिङ । कोभिड –१९ को महामारी रोक्न सरकारले गरेको लकडाउनपछि घर हिँडेका मजदूर धादिङ र चितवनको सिमाना मौवाखोलामा रोकिएका छन् । कामका लागि जिल्लाका...
संवैधानिक आयोगको नियुक्तिबारे सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग लिखित जवाफ
प्रमुख राजधानी समाचारदाता - February 5, 2021 0
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषदको बैठकका सिफारिसका आधारमा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्तिबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको...
प्रदेश ३ राजधानी समाचारदाता - July 27, 2020 0
विराटनगरका प्रशिक्षक यानलाई १ सिजन प्रतिबन्ध
खेल राजधानी समाचारदाता - May 27, 2021 0
काठमाडौं । नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) का दौरान खेल भावनाविपरीत व्यवहार गरेको र अनुशासन तोडेको भन्दै विराटनगर सिटी एफसीका भारतीय प्रशिक्षक यान कारबाहीमा परेका...
‘छाडा भयो गाईजात्रा’
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - August 4, 2020 0
काठमाडौं । हास्यव्यंग्य अभिनेता शिवहरि पौडेलको नजरमा पछिल्लो समय गाईजात्रा छाडा भएको छ । गाईजात्रालाई अहिलेको पुस्ताले छाडा बनाएको यी अभिनेताको कथन छ । सामाजिक...
Editor-Picks रुद्र सुवेदी - April 29, 2021 0
नेपालगञ्ज । बाँकेमा कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्दैगर्दा स्थानीय तहले कोरोना संक्रमितको लागि हाईफ्लो अक्सिजन सुविधा सहितको आइशोलेशन तीब्र रुपले तयार गर्दैछन् । कोरोना भाईरसको...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - June 8, 2020 0
बागमती प्रदेशको बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार
नरोत्तम वैद्यको अभिव्यक्ति आपराधिक र आपत्तिजनक : एमाले
मधुजंग पाण्डे - June 15, 2021